Manchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Chelsea Kusii Dheeraysatay Hoggaanka & Thomas Tuchel Oo Eeday Isbeddelladii Uu Sameeyey - Laacib
HomeWararka CiyaarahaManchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Chelsea Kusii Dheeraysatay Hoggaanka & Thomas Tuchel Oo Eeday Isbeddelladii Uu Sameeyey
Manchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Chelsea Kusii Dheeraysatay Hoggaanka & Thomas Tuchel Oo Eeday Isbeddelladii Uu Sameeyey
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa 13 dhibcood ku qabatay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay Etihad Stadium ku garaacday Chelsea oo kaalinta labaad ku jirta.
Guul uu dhamaadka ciyaarta oo ay 20 daqiiqadood ka hadhsan tahay uu u dhaliyey Kevin de Bruyne yaa Manchester City u go’aamiyey guushan oo usii dhoweysay hanashada horyaalka Premier League oo u muuqanaya in xilli horeba uu Pep Guardiola gacanta ku dhigi karayo.
Manchester City oo in ka badan 20 kubbadood keentay xerada ganaaxa Chelsea ayaa waxay u ahayd guushii 12aad oo xidhiidh ah ee ay kasoo hoyso horyaalka Premier League, waxaanay hadda 13 dhibcood ka horreysaa Chelsea oo labaad fadhida, halka Liverpool ay u dhexeeyaan 14 dhibcood, laakiin berri ayay Reds la ciyaari doontaa Brentford oo ay soo yarayn karaysaa farqiga dhibcaha ay hoggaanka ku hayso City.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar ay Manchester City lasoo gashay, waxaanay daqiiqadihii ugu horreeyey ba ku qasbeen Marcos Alonso inuu dib u fadhiisto oo uu is-dejiyo markii uu kaadh digniin ah ka helay garsooraha daqiiqaddii 8aad.
Kepa Arrizabalaga ayaa labada kubbadood ka badbaadiyey John Stones iyo Phil Foden ka hor intii aanu Jack Grealish ula imanin kubbad halis ahayd oo uu kusoo baxay kaddibna kusii dhacday oo goolka dhinac-martay, taas oo City ay ku heshay koorne.
Fursaddii ugu fiicnayd qaybta hore waxa lumiyey Jack Grealish oo ka faa’iidayn kari waayey qalad uu sameeyey Mateo Kovacic oo kubbad ka baxsatay uu laacibka reer England awoodi waayey inuu ku hubsado shabaqa, waxaana fursaddaas khasaartay ka cadhooday Pep Guardiola oo madaxa qabsaday.
Chelsea ayaa dhawr kubbadood oo inta badan ka yimid dhinaca bidix waxay qaybta hore geystay xerada ganaaxa, hase yeeshee waxay u muuqanayeen in afkooda hore ay awoodi la’ yihiin inay kubadda is-gaadhsiiyaan iyadoo ay difaaca City dhexda ka qabsanayeen.
Qaybtii labaad ayay Chelsea ku fuartay fursad halis ahayd oo ay ku sigeen gooLKA. Mateo Kovacic ayaa kubbad u tuuray Lukaku oo ay isku kaliyeysteen goolhaye Ederson, waxaana uu goolhayaha reer Brazil lugta ku joojiyey kubadda, markii ay dib usoo noqotayna Hakim Ziyech ayaa birta dul-mariyey.
Raheem Sterling ayaa lagu qaaday offside kubbad uu kala yimid garabka midig oo uu ka helay John Stones, waxaana ka dhabqiyey garsooraha oo ku qaaday Offside.
Daqiiqaddii 70aad ayay Manchester City heshay goolka guusha siiyey, waxaana u saxeexay Kevin de Bruyne oo kubbad laga soo boobay N’Golo Kante ku hubsaday shabaqa. Cancelo ayaa ahaa xiddiga kubaddan kasoo shaqeeyey ee u dhiibay De Bruyne oo isaugna lugta midig ku dhamaystiray.
Hudson-Odoi ayaa difaaca Manchester City kasoo jabiyey dhinaca bidix. Kubbad uu ka helay Azpilicueta ayuu u dhiibay Werner oo ku qabtay goolka, balse waxa hor-istaagay Laporte oo kubaddaas difaacay.
Manchester City ayay guushu ku raacday 1-0, waana isla natiijadii ay labada kooxood kusoo kala baxeen kulankoodii Stamford Bridge ee horraantii xilli ciyaareedka ee ay Man City kusoo heshay saddexda dhibcood.
Thomas Tuchel ayaa ciyaartan waxa uu fadhiiyey Mason Mount oo uu waqti dambe keenay, waxaana la tebayay booskiisii iyo hal-abuurkii uu ka samaynayay dhexda hore iyo caawintiisii weerarka.
Si kastaba, Manchester City waxay
Nour mohaned says:
Anigoo ah chalsea waxan eedeenataa afka hore chalsea